Dareen ka dhashay Muslimiinta ilaalisa masaajidda Maraykanka - Jigjiga Online
HomeArimaha BulshadaDareen ka dhashay Muslimiinta ilaalisa masaajidda Maraykanka
Markii uu dhacay weerarkii lagu qaaday labadii masaajid ee magaalada Christchurch ee dalka New Zealand, magalaada New York ayaa laga billaabay gawaari iyo dad roondo sameeya oo aan dawli ahayn si ay u ilaaliyaan goobaha cibaadada, ammaan ilaalintan dheeriga ah ayaase muran dhalisay.
Maalintii Jimciha daqiiqado ka hor intaan laga aadaamin masaajidka Brooklyn dhallinyaro Muslim ah ayaa u jihaystay dhanka masaajidka iyaga oo wata gawaari u qaab eg kuwa booliiska magaalada New York.
Gawaarida ay wataan oo leh nalalka la shido marka ay jirto xaaladda degdegga ah ayaana masaajidka hortiisa la dhigay, halkaas ayayna dhalinyaradii ku sii sugnaayeen, halka dadkii kale ee cibaadaysanayay ay masaajidka gudahiisa galeen.
Gawaarida iyo dadka mutadawiciinta ah ayaa ka socda kooxda MCP oo ah mid iskeed isu maalgalisa, waxaana loo samaeeyay si ay ilaalo dheeri ah ugu noqdaan agagaarka masaajidda iyo iskuullada diinta Islaamka lagu barto wakhtiyada ay dadku isugu yimaaddaan.
Nuur Rabax oo mutadawac ah ayaa wax ka aasaasay kooxdaas.
Waxay rajaynayaan in dambiyada ay ka hortagi doonto gaariga oo laga daaro dhawaaqa la adeegsado marka ay xaalad jirto iyo nalalka lagu la daaro.
“Ma nihin murqihii booliiska New York. Balse waxaannahay indhihii iyo dhagihii si aan u wargalinno,” ayuu yiri Rabah oo si rasmi ah u billaabay gaafwareegidda masaajidda ka dib markii bishii Maarso la dilay 51 ruux oo Muslimiin ah oo salaadda Jimcaha ku tukanayay labo masaajid oo New Zealand ku yaalla.
In badan ayay dadka cibaadaysanaya dareen ka qabeen ammaanka, balse weerarraduu Christchurch ka dib arrin ahmiyad leh ayay noqotay.
Iyadoo lagu jiro bisha barakaysan ee Ramadan Golaha Xiriirka Musimiinta Maraykanka oo ah midka ugu wayn ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Muslimiinta ayaa bulsha Muslimiinta ah ugu baaqay in ay feejignaadaan xiligan cibaadada lagu mashquulsan yahay, ilaalinta ammaankana ay sare u qaadaan.
Masaajid badan ayaa sameeyay tababarro ammaan xumo loogu diyaargaroobayo waxaana ka mid ahaa kuwo laga dhigayay in hub lagu soo weeraray masaajidka iyaga oo dadka la tusayay wixii ay samayn lahaayeen haddii arrin sidaas oo kale ah dhacdo.
Muslimiinta ayaa sare u qaadday gaafwareeggidda gudaha iyo dibadda masaajidka, balse baraha bulsha ayay mucaaradad kala kulmeen.
Dadka siyaasaddoodu garabka midig ee fog tahay ayaa ku eedeeyay in ay shareecada Islaamka hirgalinayaan.
“Waa cabsi ay qabaan kuwo aan wax ogayn” ayuu ku jawaabay Rabah.
“Ogolaada in ficilladanadu idin tusaan sida ay noloshanadu tahay”.
Dadkan Muslimiinta ah ee gaafwareeggidda samaynaya booliis ma aha, mana hubaysna, wax xil ahna ma hayaan.
Dad badan oo bulshada ka mid ah ayaa soo dhaweeyay, balse kuwo kale ayaa su’aal galiyay.
Somia Elrowmeim oo ka shaqaysa Ururka Carabta Maraykanka ku nool ee New York ayaa sheegay in ay su’aalo badan ka qaban waxa ay dadkaasi yihiin.
“Waxaan rabnaa in ay bulshada faraha kala baxaan. Dhibkii yar ee ay sameeyaan bulsha oo dhan ayay si xun u saamayn,” ayay tiri Somia
Waxay sheegtay in bulshada Muslimiinta ah ay canshuur bixiyaan sida bulshooyinka kale, hawsha ammaan ilaalintuna ay u taallo booliiska New York.
Masaajidda caanka ah hadda waxaa ku sugan booliis badan.